Ngwọta - gomymobi.com
Onyinye Ngwọta Ndị Dị Ike
Mee azụmahịa gị ihe ịga nke ọma & fee elu !!!
gomymobi.com Ezubere iji nyere gị aka iru saịtị azụmahịa gị ngwa ngwa, ngwa ngwa & ọfụma. Ngwaọrụ niile dị mkpa iji chee azụmaahịa gị na ngwaahịa imepụta ụwa.
Chọpụta ihe ndị dị n'okpuru n'okpuru ike ị nwere ike iji chepụta ma jikwaa ọnụnọ gị n'ịntanetị.
ma ọ bụ Bido Ugbu a
Ka anyị chee aha gị & ngwaahịa okike kachasị mma nye onye ọ bụla nọ n'ụwa yana onye na-ewu ụlọ ahịa eCommerce. Anyị na-enyere gị aka ịmepụta ụlọ ahịa na-akparaghị ókè, ịre ngwaahịa na-akparaghị ókè; maka enweghị azụmahịa azụmahịa, enweghị ego ego; ị ga-enweta ụgwọ 100% maka ihe ị na-ere.
Mepee Echekwala & Ree
Ndị Ahịa Anyị Dị Nnọọ Ahụ Na-ahụ Ihe Ngwọta Dị Egwu
Ihe mgbaru ọsọ mbụ anyị na-elekwasị anya iji mee ka ndị ahịa anyị nwee obi ụtọ. Eeh, otu a ka anyị si arụ ọrụ maka azụmahịa gị.
Ọganihu Ngwọta Azụ ahịa
Omenala Usoro Editor
Ndenye aha na Virtual ngwongwo
Bido iwulite webusaiti azụmahịa gị site na ncha ma ọ bụ họrọ site na ọtụtụ ndebiri nke ndị ndebe mere. Site na ịdọrọ na dobe onye na-ewu weebụsaịtị, ị nwere ike ịmepụta ma mepee weebụsaịtị ọ bụla ịchọrọ ma ọ bụ ịchọrọ.
Gbalịa Element Builder maka n'efu
Gbakwunye akụrụngwa azụmaahịa bara ụba na saịtị ọ bụla. ECommerce niile, nkwanye, na otu esi edozi ya n'ụzọ zuru oke ma bịa na omume nnabata.
Nyochaa na Omume
Mee ngwa weebụ dị elu site na iji nchịkọta koodu nchịkọta iji tinye ma ọ bụ dezie ihe ọ bụla ịchọrọ. Jikwaa ọdịnaya niile dị arọ n'azụ Mpaghara ma gosipụta ya nke ọma na nhazi mmegharị ugboro ugboro.
Ree ndenye aha na okwu ọ bụla, ndị otu na nchịkọta maka ọrụ, ngwa ahịa mebere, ọdịnaya, obodo na ngwanrọ. Nye otu ịkwụ ụgwọ ugboro ugboro ma ọ bụ otu oge yana ọtụtụ ụdị nnwale oge iji ọtụtụ ndị na-eweta ịkwụ ụgwọ echekwabara.
EGO maka weebụsaịtị azụmahịa gị
gomymobi.com Obi dị gị ụtọ inyere gị aka ịmepụta saịtị azụmaahịa mbụ gị, ma were ya nọrọ na ya n'efu na ndụ.
Ndebanye aha dị mfe & ngwa ngwa, enweghị kaadị akwụmụgwọ achọrọ; na ebe nrụọrụ weebụ gị na ebe nrụọrụ weebụ na-akwụghị ụgwọ & azụmahịa na-anọnyere anyị ruo mgbe ebighị ebi.
Mepee ụlọ ahịa na-akparaghị ókè
Ọ bụrụ n'ịchọrọ imepe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-akparaghị ókè iji ree ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche, ịnwere ike ịme ihe niile dị mfe.
Ree ngwaahịa dị iche iche
Site na ikpo okwu eCommerce anyị, ị nwere ike ree ngwa ahịa dijitalụ na nke anụ ahụ, yana ọbụlagodi na otu ụlọ ahịa ahụ ka ọ dị mfe.
Ngalaba Aha omenala
Ọ bụrụ na ị nweela ngalaba ma chọọ iji ya maka websaịtị emepụtara, naanị ị ga-ekenye ngalaba a ma jiri webụsaịtị a jiri ọsọ weghaara azụmaahịa azụmahịa gị. Businesslọ ọrụ azụmahịa gị dị ka ọkachamara na ngalaba ahaziri iche.
Bulite site na FTP
Y’oburu n’inwe onye nwe ulo ka ichoro iwebata webusaiti gi, anyi nwere ngwa di mfe iji nyere gi aka bulite faịlụ websaịtị gi niile na igwe gi. Ma ọ bụ ị nwere ike ibudata saịtị niile na mpaghara gị.
Pụrụ iche subdomain maka saịtị ọ bụla
Inwe ike ibipụta ma debe ebe nrụọrụ azụmaahịa gị na 1 pịa naanị.
Ndekọ ọnụ ọnụ & mgbanwe
Ozugbo ị afọ ojuju na ngwọta anyị, anyị na-enye ọtụtụ ndebanye aha iji kwalite akaụntụ gị iji nweta atụmatụ ndị dị ike karị.
Irite site n'ire Ikike Okwu
You na-enwe ike irite anyị ego, site na iresị ndị ọrụ ndị ọzọ ikikere isiokwu gị. Ga-enweta ego niile, anyị anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla.
Ahịa Okwu Ahịa
gomymobi.com bụkwa ebe ndị ọrụ niile na-ere isiokwu ha kachasị amasị ha, ndị okike nwere ike ịnye isiokwu n'efu ma ọ bụ ree maka ikikere 2: site na okike ma ọ bụ ndụ niile.
N'ụzọ doro anya, ndị okike nwere ike itinye koodu mgbasa ozi nke ha (ma ọ bụ ikpo okwu) n'ime isiokwu ha ozugbo ha ga-achọ inye ha n'efu.
UNLIMITED weebụsaịtị na ibe
Nwere ike ịmepụta weebụsaịtị na-akparaghị ókè yana maka weebụsaịtị ọ bụla mepụtara ibe weebụ na-akparaghị ókè.
Wuru na-Tracker Tracker
Anyị nwere okporo ụzọ eji eme ihe na-enyere gị aka ịgụta nleta na nlele peeji, enwere ike nyochaa ọnụọgụ ndị a kwa ụbọchị.
N'ezie, ị nwere ike itinye usoro ihe nchọgharị ọzọ gị, dị ka Google Analytics mfe na ngwa ngwa.
Saịtị na gburugburu na-anabata ozi zuru ezu
Isi okwu na saịtị niile na-anabata ma na-enwe mmekọrịta enyi na enyi, ezubere iji rụọ ọrụ na ihuenyo ọ bụla nke ihe nchọgharị ọ bụla.
Ma nke dị mkpa karị, Ogwe njikwa na njikwa na-azaghachi nke ọma, ndị ọrụ nwere ike ijikwa & mepụta saịtị oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Ezubere usoro anyị iji nye weebụsaịtị gị ma chekwaa ọsọ na arụmọrụ kacha mma.
Temkpụrụ dị egwu
Họrọ site na gburugburu 95 mmebe-mere gburugburu gburugburu maka azụmahịa ọ bụla ịchọrọ ịmalite.
Chepụta ma mepee saịtị gị nke ọma otu ị chọrọ iji dọrọ na dobe anyị.
Meewanye Nchọgharị Media
Gosiputa onyonyo gi, vidiyo ma obu ihe obula obula n’ime ihe ngosi ihe nlere anya n’ime ihe nchọgharị Media di ike.
Mara mma ụlọ ahịa
Wepụta ma ree ngwa ahịa gị dijitalụ ma ọ bụ nke anụ ahụ na ọrụ ma ọ bụ azụmahịa na ụlọ ahịa n'ịntanetị mara mma.
Storelọ ahịa & Onye njikwa ngwaahịa
Sochie iwu niile ma jikwaa ngwongwo gị site na mkpebi ọ bụla: desktọọpụ, laptọọpụ, mbadamba ma ọ bụ mobile.
Otutu ugwo ugwo
Nye onyinye ịkwụ ụgwọ a pụrụ ịdabere na ya nke na-eme ka azụmahịa n'ịntanetị dị mfe ma dị mma maka gị na ndị ahịa gị. Nabata kaadị akwụmụgwọ, PayPal, Stripe, Authorize.net, ịkwụ ụgwọ na-anọghị n'ịntanetị na ndị ọzọ - ọrụ n'efu.
Kupọns na ego
Mbuli ụlọ ahịa na-ere ahịa site na ịbelata ego ego na mbupu n'efu na iwu maka ihe omume pụrụ iche.
Kwe ka anyị bulie azụmaahịa gị ma mee ka ọ fee elu !!!
Wụpụta weebụsaịtị gị na ụlọ ahịa ugbu a